यो महाधिवेशनबाट दोश्रो पुस्ताका नेता कांग्रेसको नेतृत्वमा आउनेछन्: शशांक कोइराला - Nepal Daily
शनिबार, २६ असार २०७८, २० : ०९ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाले पार्टीको आगामी नेतृत्व दोश्रो पुस्ताका नेताले गर्ने बताएका छन् । उनले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण हुने बेला आईसकेकाले अबको नेतृत्व आफु, बिमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह मध्ये एक जनाले लिने उद्घोष गरे । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले नेताद्वयलाई आफुले त्यस किसिमको भूमिकाका लागि आग्रह गर्ने बताए । तेरो र मेरो भन्ने स्वभावका कारण सभापति देउवा पार्टीको सफल सभापति बन्न नसकेको टिप्पणी उनले गरे । नेतापुत्र त्रयको भेटघाट गुटउपगुटको अन्त्य गरि पार्टीलाई एकढिक्का बनाई सहमतिका साथ सभापतिको उम्मेदवार चयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने कार्यमा केन्द्रीत भएको उनले स्पष्ट पारे । तीन नेताको भेटघाट पार्टी भित्र नयाँ शक्ति र गुट निर्माणका लागि नभई एकताको लागि भएको एउटा सफल र प्रभावकारी प्रयासको रुपमा बुझ्न पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
प्रस्तुत छ , आसन्न महाधिवेशन , क्रियाशिल सदस्यता तथा नयाँ नेतृत्वका सम्बन्धमा नेपाली काग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालासंग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:
अहिले शीर्ष नेताका तीनजना पुत्र नेताहरुको संयुक्त भेटघाटलाई लिएर विभिन्न विश्लेषण भएका छन् । अर्को गुट आउन खोज्यो अथवा शक्ति केन्द्रीत गर्न खोजियो भनेर पनि टिप्पणी भएका छन् । खासमा के थियो तपाईहरुको बैठकमा ?
खासमा विमलेन्द्र निधीले नै इनिसियट गरेको हो । सबै भन्दा पहिले उहाँको बैबाहिक सम्बन्धको ३५ बर्ष भएको थियो । त्यो दिन प्रकाशमान सिं र मलाई बोलाउनुभयो । दोश्रो पटक यही मिटिङ गर्यौ र तेश्रो पल्ट प्रकाशमान जी को मा । हाम्रो भनाई के थियो भने, हामी पनि एकै ठाउँमा उभिनुपर्यो । सभापतिका लागि हामी ३ जना मध्ये कोही लड्छ भने ठिकै भयो । हामी मध्ये एकता हुनुपर्यो भन्ने कुरा आयो । यसमा धेरै कुराहरु उत्पन्न छन् । एउटा कि विमलेन्द्र निधीले शेर बहादुर जीलाई छाड्नुभयो भने भन्ने पनि संकेत देखिन्छ । दोश्रो कुरा हामी तिनै जना मध्ये एकजना लड्ने, तर त्यत्तिले पुग्दैन । रामचन्द्र दाइ, शेखर दाइ हुनुहुन्छ , प्रकाशमान र म त छदै छु । बिमलेन्द्र नीधि हुनुहुन्छ । मैले के भनेँ भने, हामी तीनजनाबाट ५ जना गरौ, ५ जनाबाट ७ जना गरौं, ताकि हामी एउटै सुत्रमा बाँधिन सकौ भन्ने धारणा हाम्रो थियो । तर यता आएर हाम्रो बीचमा केही छलफल भएको छैन ।
मुलुकको समुल राजनीतिक अवस्था प्रतिकुल भएकाले नेतृत्व परिर्वतन नगरौ भन्ने आवाज पनि छ फेरि यता नेतृत्व परिवर्तनका लागि तपाईहरुको पहल पनि भईरहेको छ । ठयाक्कै समय आएको हो पुस्तान्तरण वा नेतृत्व परिवर्तनको ?
आफ्नो कार्याकालमा शशांक कोइरालाले बोल्नुपर्ने बेलामा बोलेनन्, कार्यकाल सकिएको समितिले भटाभट नियुक्तिहरु गर्यो , त्यसमा दहे गरि बोलेनन् । नेतृत्वले आफ्नो हिसाबले पेलेर नियुक्ति दिने, मनोनय गर्ने कुराहरु भए, त्यो बेला पनि बोलेनन् । जुन बेला नबोल्नुपर्ने थियो धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयमा त्यसबेला बोले किन ?
तर यता पार्टी विधान, संविधानभन्दा बाहिर गएर बोलेको चाहीँ ? एक पटक होइन तीन तीन पटक धर्मको बारेमा बोल्दिनुभयो । जुन बेला समयनै थिएन ।
सबै भन्दा पहिला पार्टीलाई एकजुट बनाउने कुरा छ । हाम्रो धरासायी हुने प्रथम काराण के हो भने टुक्रा टुक्रा भएको, गुटउपगुटहरुले ध्वस्त पारेको छ । सभापति आजको मितिमा पनि तेरो मान्छे , मेरो मान्छे भन्नुहुन्छ । उहाँ त सबैको सभापति हो नि । उहाँले आफ्नो धारणा परिर्वतन गरेको भए उहाँनै सफल सभापति हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले आजको मितिसम्म ‘उसको मान्छे ,मेरो मान्छे’ भन्नुहुन्छ । म के चाहन्छु भने पार्टीलाई एक बनाऔ । पार्टीभित्र अहिलेको विधान राम्रो विधान होइन । विपि कोइरालाले सभापतिय पद्धतिमा जानुपर्छ अर्थात् सबैलाई चुनाव लड्न नदिएर केही सिटहरुचाही मनोनित हुनुपर्छ किनभने प्रेसिडेन्सीयल सिस्टममा प्रेसिडेन्ट त चुनावबाटै आउनुपर्यो तर ऊ आईसकेपछि उसले आफ्नो शक्तिलाई सन्तुलित राख्नका लागि मनोनित गर्ने ठाउँ हुनुपर्यो । महामन्त्री एकजना, उपसभापति जना....यस्तै गरेर उसको पार्टीप्रतिको पकड बलियो हुनुपर्यो । सबैले लडेर हुदैन । अधिवेशन भईसकेपछि महासमिति डाकेर यो विधानमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु ।